Vohitra toy ny orinasa mandroso mankany amin'ny vondrom-piarahamonina Karaiba
Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Vohitra toy ny orinasa mandroso mankany amin'ny vondrom-piarahamonina Karaiba
Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
I Jamaika dia nomen'ny Ivotoerana Iraisam-pirenena misahana ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) ho TOERAM-PIRENENA FIARAHAM-PIRENENA satria teo no nanombohana azy io 45 taona lasa izay an'ny tompona / mpandraharaha ao amin'ny The Astra Country Inn Mandeville avy eo ary i Desmond Henry izay nodimandry. , talen'ny fizahantany taloha. Niara-namorona ny Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) izy ireo mba hampiroborobo ny fizahan-tany ho an'ny vondrom-piarahamonina any amin'ny morontsiraka atsimon'i Jamaika.
Nahazo fankasitrahana eo an-toerana sy iraisam-pirenena ny Network Country Community Community Network.
Diana McIntyre-Pike dia nahazo loka marobe tamin'ity hetsika ity.
Ny programa Villages as Businesses (VAB) dia nametraka fiofanana momba ny fandraisana vahiny momba ny fandraharahana mandritra ny dimy andro any amin'ny vondrom-piarahamonina maro any Jamaika sy ny faritra Karaiba.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny CCTN dia namorona fikambanana mpikambana tsy mitady tombom-barotra antsoina hoe VILLAGES AS BUSINESSES (VAB) izay nahazo fankatoavana eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Ny Countrystyle Community Tourism Network dia mpikambana ao amin'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN), ary i Diana McIntyre-Pike dia nahazo loka marobe tamin'ity fandraisana andraikitra ity, ny farany tamin'ny taona 2020 avy amin'ny WTN vao niforona ho iray amin'ireo matihanina fizahantany 17 nahazo loka iraisam-pirenena Loka maherifo momba ny fizahantany, programa loka malaza.
Ny programa Villages as Businesses (VAB) dia nametraka fiofanana momba ny fandraisana vahiny momba ny fandraharahana mandritra ny dimy andro any amin'ny vondrom-piarahamonina maro ao Jamaika sy ny faritra Karaiba izay efa nohamarinin'ny University of the West Indies (UWI) Open Campus. Ny fiofanana dia manarona ny fampandrosoana manokana, ny fikarohana momba ny fananana mety misy sy ny mety, ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana, ny fizahan-tany ary ny fifantenana ny vokatra, ny fampandrosoana ny orinasa, ny fiarovana ary ny kavina COVID. Ny iray amin'ireo fikambanana Jamaikana Diaspora, Making Connection Work UK, dia nanohana ny VAB sy ny marketing TOURISMON'OMBONDROMBON'NY Vondron-tokana ho toy ny fomba elo.
Ilay Farany Desmond Henry
Ny Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) dia nanapa-kevitra vao haingana fa ny Jamaikana sy Karaiba Diaspora no ho mpamatsy vola sy mpamatsy vola. Izy io dia namorona tahirim-bola manokana momba ny fizahantany ho an'ny fiarahamonina antsoina hoe COMFUND miaraka amin'ny Birao Diaspora vonjimaika. Ny COMFUND dia voasoratra ara-dalàna any Etazonia ankehitriny ary amboarina miaraka amina andrim-panjakana ara-bola hanamorana ny fanomezana sy ny fampiasam-bola mety hitranga. Ny zanabola amin'ny COMFUND dia hanohana findramam-bola zanabola sy hanome famatsiam-bola ho an'ny tetikasa fampandrosoana maharitra ny vondrom-piarahamonina natolotry ny mpikambana ao amin'ny Village as Businesses. Ny fialan-tsasatra sy fitsangatsanganana ho an'ny CCTN Community Lifestyle ho avy rehetra dia hisy fandraisana anjara amin'ny COMFUND.
Vao vita ny fiaraha-miasa iray miaraka amin'ny sehatra fampiharana finday any Karaiba Diaspora antsoina hoe TravelJamii izay hivoaka amin'ny volana septambra 2021. Ny TravelJamii App dia ahafahan'ny Community Global miaina ny zava-drehetra any Karaiba amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany, fizahan-tany eo amin'ny fiarahamonina, marika lehibe, orinasa eo an-toerana , manintona, hetsika, sakafo, tantara, natiora, vaovao ary maro hafa.
Dr. Samuel Lee Hancock, CM hoy:
September 2, 2021 ao amin'ny 20: 58
Tsara ny tolakandro avy any Washington, DC Diana! Karaiba tsy mampino sy fandrakofana manerantany momba ny "Village as Businesses" ataonao ao anatin'ny Network Country Community Community Network (CCTN). Ny anao dia hetsika mahery vaika any Jamaika sy manerana ny firenena 34, faritany ary fiankinan-doha any Karaiba. Inona no fanentanana sy fandrakofana iraisam-pirenena tsara ho an'ny sehatra fampandrosoana tsy manam-paharoa sy miankina amin'ny vondrom-piarahamonina.
Fotoana izao hiadian-kevitra momba ny soso-kevitra momba ny soso-kevitra Iraisampirenena Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) Karaiba sy Amerika Latina ho an'ny fandrakofana ny tontolon'ny Karaiba manontolo amin'ny fahitalavitra The EmeraldPlanet. Ireo dia ho an'ny fampielezam-peo isan'andro na eo an-toerana na any ivelany. Ny ecotourism amin'ny fomba fiarahamonina sy ny agritourism anao dia tena mitondra fifandraisana, fahatakarana, varotra, fanamafisana vehivavy sy fiarahamonina ary fandriampahalemana manerana an'i Karaiba sy erak'izao tontolo izao.
Fizarana eto ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, ny fampisehoana ary ny Podcast an'ireo fikambanana miavaka anao…
(Raha tsy misy rohibe ny URL dia adika fotsiny sy efa lasa ao amin'ny tranonkalanao. Ankafizo ny dianao!)
Lohateny: "Ny vehivavy mitarika ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fanabeazana momba ny fandraharahana sy ny fambolena voajanahary maharitra"
The EmeraldPlanet International Foundation © URL Program an'ny YouTube:
Asehoy ny lohahevitra '1': “Manomana ny làlana ho an'ny fizahan-tany ara-toekarena avy any Jamaika sy Karaiba” https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Asehoy ny lohahevitra '2': “Fiofanana ho an'ny vehivavy sy ny asa fandraharahana ho an'ny orinasa fizahan-tany miorina amin'ny fiarahamonina” https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Asehoy ny lohahevitra '3': “Ny vehivavy mitarika fiompiana orinasa voajanahary amin'ny fiarahamonina” https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Asehoy ny lohahevitra '4': “Fanajana ny haitao sy ny fomba fiainana teratany”
Podcast "Mpampianatra vehivavy manova fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fanabeazana momba ny fandraharahana sy ny fambolena voajanahary maharitra": https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Mirary soa indrindra an'i Diana amin'ity rakipeo haino aman-jery mahafinaritra ity sy ny maro hafa ho noforonina amin'ny ho avy momba ny "Vohitra ataon'ny orinasa" ao anatin'ny Network Country Community Community Network (CCTN) rehefa miaraka mamorona ny The EmeraldPlanet © izahay.